Ukuthengisa ikhaya ngePlatifs yeNtlalontle- Ukuba ucwangcisa
uJanuwari 19, 2017 by Ukubuyiswa kwe-cormac, Iimbono zizonke:
Ukuba ucwangcisa ukuthengisa ikhaya lakho kusetyenziswa amajelo asekuhlaleni, ungafuna ukugcina iingcebiso ezimbalwa:
Yandisa abaphulaphuli bakho
Sebenzisa amaqonga eendaba ezentlalo ukuthengisa ikhaya lakho yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa imakethi yakho. Akukho namnye kubahlobo bakho okanye abalandeli onokuthi babekho ekuzingeleni ikhaya elitsha, kodwa banokumazi umntu othile. Ukuba babona ifoto yendlu yakho kwiindaba zeendaba kunye nesithuba esivela komnye umlandeli okanye umhlobo oceba ukuhambisa indawo yakho, banokwabelana ngezikhundla zakho. Ukwenza i-buzz enendawo ezinjenge Vibbi inokuba yindlela elungileyo yokuqalisa umzamo wakho wemidiya yoluntu.
Ukuthatha iNzuzo yeNdawo
Ukuba ufuna ukuthengisa indlu yakho ngokukhawuleza, unokufuna ukusebenzisa indawo elungiselelwe wena. Umzekelo, ngexesha elibandayo, ukuthumela ifoto yendlu yakho eFlorida kwaye ubandakanye ne-caption yemozulu efudumeleyo, unokukwazi ukubakholisa abathengi abadinwe likhephu okanye ujonge ukufudukela emazantsi eFlorida.
Ukuthumela kakhulu Kwento efanayo ngokukhawuleza kuyacaphukisa abahlobo bakho kunye nabalandeli. Ukuba uthumela iifoto ezininzi zekhaya onqwenela ukuzithengisa, abanye babalandeli bakho banokukuvimba okanye bakususe ekutyeni kwabo. Yigcine imfutshane nje kwaye uphephe ukoyisa abaphulaphuli bakho.
Emva kokuba Uthengisile
Ukulungiselela ukuthengisa indlu yakho sisiqalo nje senkqubo. Nje ukuba uthengise, unexesha elincinci ekufuneka uphume kulo. Ukugcina oko engqondweni, unokufuna ukujonga kwizinto zokugcina eziphathwayo njengoko zisenza lula inkqubo. Uya kuba nako ukupakisha izinto zakho njengoko ixesha lihamba uyokuthenga kwaye ubayise kwindlu entsha kwisantya sakho.
Imithombo yeendaba zentlalo ngokungathandabuzekiyo yindlela enhle yokuthengisa ikhaya lakho. Ngokuthumela iifoto kunye nokudweliswa, ungasebenzisa ithuba labaphulaphuli bakho kwaye wandise amathuba okuthengisa ikhaya lakho ngokukhawuleza. Gcina iingcebiso ezikhankanyiweyo engqondweni, kwaye uya kumangaliswa yindlela ekulula ngayo ukufumana umthengi onokubakho.
Nangona kunjalo, amaqonga eendaba ezentlalo akhule kakhulu kule minyaka idlulileyo kwaye ngoku asetyenziselwa ukukhuthaza amashishini kunye neempawu.
Ukubuyiswa kwe-cormac January 19, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho ikhaya, Iingcebiso ngokuthengisa ekhaya, Ukuthengisa iNdlu ngokukhawuleza, Ukuthengisa ngepropathi, Thengisa Indlu ngokukhawuleza, thengisa ikhaya lakho, Thengisa indlu yakho ngokukhawuleza, Ukuthengisa Ikhaya, ukuthengisa indlu, Imidiya yokuncokola, Amaqonga eendaba ezentlalo, iindlela zokuthengisa ngokukhawuleza ekhaya. Bookmark le Permalink.
Septemba 10, 2018 Ixabiso elongeziweyo: Indlela yoLwakhiwo ngokutsha lweNdlu inokuLonyusa ngokuBalulekileyo ixabiso lePropathi yakho Indlela yokuthengisa ikhaya lakho inokuthatha ixesha, ngakumbi ukuba mninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe. Ukulungiswa kwekhaya, njengokupeyinta, ukulungisa kwakhona, ukubekeka komhlaba, kunye nokongeza izinto ezintsha, kunokunyusa ixabiso leepropathi akukho xesha. Nangona kunjalo, xa ujonge ukwenza utshintsho ngokutsha ekuthengiseni ikhaya, awufuni kuchitha imali eninzi okanye ixesha lokuyenza. Ukwazi indawo oza kuqala kuyo yeyona ngxaki inzima yokutsiba ngeli xesha. I-RealtyWW.info iza kudwelisa iindawo zokuqala ezimbalwa zabantu abasa […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 13, 2016 Indlela yokuHamba nokuThengisa indlu ngaxeshanye Iya kuba yinto entle nje ukuba inkqubo yokuthenga neyokuthengisa indlu inokugqitywa ngaxeshanye, kodwa ifuna yonke into ukuba icwangciswe ngononophelo nangokugqibeleleyo. Imihla ebekiweyo, iphepha, uphando, ukufaka, njl., Iya kuba ngumsebenzi oxinzelelweyo xa ucwangcisa ukwenza zombini ngexesha elinye. Nangona kunjalo, okwangoku, ungayilawula ngokugcina amanqaku ambalwa engqondweni kwaye ushukumise intshukumo nganye ngononophelo. Kwakhona, kuya kufuneka ulungele ukungalindeleki, ngaxeshanye. Nokuba kwenzeka njani […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Novemba 12, 2016 Sukuvumela ukuHlola iKhaya ukuba kuthengise iKhaya lakho Ukuba ufumene isibonelelo esihle sekhaya lakho kwaye uphantsi kwemvumelwano ke into yokugqibela oyifunayo kukuba kuhlolwe ikhaya ukuze kuthengiswe intengiso okanye kuxabise imali. Nazi iingcebiso ezintlanu zokuqinisekisa ukuba inkqubo yokuhlola ikhaya ihamba kakuhle nokuba uyakwazi ukuthengisa ikhaya lakho ngaphandle kokwenza ukulungiswa okanye ukubonelela umthengi ngetyala lomthengi ukwenza ulungiso emva kokuba ukuthengisa kugqityiwe. Zilungiselele ngaphambi kwexesha - Inye yeyona ndlela yokuqinisekisa ukuba une […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba